Galmudug oo ku guuleysatay in ay Fashiliso Qarax | KEYDMEDIA ONLINE
Galmudug oo ku guuleysatay in ay Fashiliso Qarax
Maamulka Saldhigga degmada Dhuusamareeb ee xarunta Dowlag goboleedka Galmudug ayaa ku guuleystay in ay fashiliyaan Qarax.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Maamulka saldhigga degmada Dhuusamareeb ayaa fashiliyay qarax, kaasoo ahaa gasac laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo la dhigay dhabarka dambe ee Saldhigga degmada Dhuusamareeb. Dadka deegaanka ee ku dhaw xarunta saldhigga ayaa qeyb ka qaatay fashilinta qaraxan.
Taliyaha Saldhigga ayaa la hadlay warbaahinta waxa uuna sheegay in qarax lala damacsanaa xarunta Saldhigga degmada laga hortagay, mana jiraan wax qasaare ah oo dhacay, waxaana ciidamadu ay ku guuleysteen in ay kala furaan, Gasaca oo ay ku jiraan walxaha qarxa ayaa lagu dhex riday Mobile bac lagu xiray, waxaana uu ahaa mid mobile ka lasoo marsiiyo qaraxaas.
Xarunta maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa maalmahan amni darradeedu cirka isku sii shareereysay, waxaana qaraxyo hore ay ka dhaceen waddada isku xirta Dhuusamareeb iyo Guriceel kuwaasoo lala eegtay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo dad shacab ah oo waddada isticmaalayay.